ट्यांकीमा पैसा लुकाउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सबै सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा, ‘ऋण’मा परराष्ट्रमन्त्री - Sidha News
ट्यांकीमा पैसा लुकाउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सबै सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा, ‘ऋण’मा परराष्ट्रमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रोपटक शपथग्रहण गरेपछि सबै मन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमती धनी र मन्त्री चाहिँ आर्थिक रुपमा विपन्न रहेको देखिएको छ।
मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण स्वदेश नेपालले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले रक्षामन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देखाएको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक छ।
‘मन्त्रीहरूको, नेताहरूको सम्पत्ति सबै श्रीमतीकै नाममा देखिन्छ, अचेत हामी कर्मचारीलाई पनि स्वाभाविक नै लाग्न थालेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित सम्बन्धित विभागका एक अधिकृतले भने।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा!
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै बेला प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनकी श्रीमती मीरा ध्वँजु पोखरेलको नाममा सम्पूर्ण घरजग्गा र जमीन रहेको प्रष्ट पारिएको छ।
झापाको चन्द्रगढीमा पैतृक सम्पत्ति वापत १२ कठ्ठा जग्गा पोखरेलको नाममा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ७ लाख रुपैयाँ बचत रहेको पनि पोखरेलले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।
धनी मन्त्रीहरूमध्येमा पर्ने उपप्रधानमन्त्री करोडौंका मालिक हुन्। पछिल्लो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउन मानेन।
स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि कयौं घोटालामा मुछिएका पोखरेलको नयाँ सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन नसके पनि अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदाको विवरणअनुसार उनका अन्य सबै सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा छ।
पोखरेलकी श्रीमती मीराको नाममा काठमाडौं टोखा–६ धापासीमा घरजग्गा रहेको छ। २३ आनामा बनेको ३ तले घर मीराकै नाममा छ।
त्यसैगरी, भक्तपुरको नगरकोटमा १ रोपनी ११ आना जग्गा पनि मीराकै नाममा छ। सम्पत्ति विवरणमा उक्त जग्गा श्रीमतीको माइतबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
पोखरेलकी श्रीमती मीराको नाममा धादिङको खानीखोलामा ४ रोपनी जग्गा पनि रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक र सानिमा बैंकमा जम्मा ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बचत रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, मीराको विभिन्न कम्पनीमा शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीमा १० हजार, कृषि विकास बैकमा २ सय, मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजमा ५ हजार शेयर मीराको नाममा रहेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
पोखरेलले आफ्नी श्रीमतीसँग वि.सं. २०२० सालयता ९ तोला सुन र २५ तोला चाँदी सम्पत्ति रहेको जानकारी गराएका छन्।
के हो ट्यांकी काण्ड?
एमाले महासचिव पोखरेल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ को घोषणालगतै पक्राउ परेका थिए। तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पोखरेलको घरमा खानतलासी गर्दा पानीट्यांकीमा पोलिथिनले बेरेर राखेको अवस्थामा रकमका बण्डन भेटिएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त प्रकरणलाई महासचिव पोखरेलले ‘माघ १९’ पुस्तकमा प्रष्टीकरण पनि दिएका छन्। यद्यपि, आपूर्तिमन्त्री भएपछि पोखरेलको आर्थिक हैसियत चाहिँ उक्सिएको एमालेकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि कम चलाख छैनन् सम्पत्तिको मामलामा। मन्त्री ज्ञवालीको सम्पत्ति वितरणअनुसार उनी श्रीमती सरस्वती ज्ञवालीको नाममा काठमाडौं–३१, शंखमुलमा ४ आना २ पैसा ३ दाममा २ तले घर छ।
‘२०६४ सालमा बुटवलको घरजग्गा बेचेर २१ लाख घर किनेको हो,’ सम्पत्ति विवरणमा भनिएको छ, ‘बैंकमा १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत ऋण रहेको छ।’
एभरेष्ट बैंकमा २ लाख ५७ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ २२ पैसा र कृषि विकास बैंकमा २ हजार बचत रहेको ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।